U guurida dhanka teknooloojiyadda. – Fatuux Tech
Fatuux Cade	Uncategorized	 November 14, 2018 1 Minute
Haddaan ka hadalno wadankeena Soomaaliya Technology yadda sidey kusoo gaartay iyo goorti ay soo gaartay iyo xilliga maanta aan taaganahnay heerka aan ka mareeno technology yadda waa wax aad u wayn oo la taaban karo.
Waxey nasoo gaartay technology yadda xilligii Gumeystaha waxeyna aheyd mid quseeso dhanka isgaarsiinta waxaana loo yaqaanay Telegraph ama Telegram. Waxuu ku tiirsanaa in fariin-qoraal la isku diro ayadoo la isticmaalaayo koronto sahleysa iney gudbiso xogta. Waxeyna Soomaalideena u taqaanay xilligaas (Dhiidhaa).
Waxaa nasoo gaaray ku dhawaad ka xilligii 1940 yaddii aallad loo yaqaanay Taar taasoo ka saacidi jirtay soomaalida iney isku maqlaan xogna kala qaataan ayagoo kala jooga meelo kala fog fog, waxeyna soomaaida u taqaanay (Halow-Halow).
Agagaarki 1970 dii waxaa si toos u hergalay in shacabka uu gashto guryahooda teleefano leen leen (line land) ah.
Sidoo kale 1997 waxaa timid shirkadda Barakaad oo bilowday si qaab casri ah iney u galiso guryaha teleefanada dhulka.
Ugu danbeyntii taariikhda maanta waxaan mareynaa 2018 heer qof walba uu heesto teleefan u gaar ah, inaan isticmaalno baraha bulshada aan isku dhaafsanno xog muddo ka yar il-libiqsi iyo inuu lahaado shacabka badankiisa computer oo danahiisa gaarka ku qabsado ayadoo lasocdaan awoodo dheeraad ah computer kooda.
Maanta waxaan taaganahnay meel fiican oo kasii anbaqaadi karno, waxaa nala gudboon inaan u sameyno shacabkeena wacyi galin ku aadan dhanka teknooloojiyadda, waa inaan ku baraarugno ka shacab ahaan iney wali wax nooga harsan tahay barashada cilmmiga teknooloojida ayadoo dunida usii guureyso dhankaas iyo tech.
Previous Post Shirkadda Google oo ku hagi doonto dhanka arimaha sirtaada oo online ka la xariira.
Next Post Sidee iskaga ilaalin kartaa tuugada ka shaqeesata online ka.